Inona ireo eReaders hiseho mandritra ity taona 2018 ity? | Ireo mpamaky rehetra
Inona ireo eReaders hiseho mandritra ity taona 2018 ity?
Joaquin Garcia | | orinasa, mpamaky
Andro vitsy monja taorian'ny nanombohantsika ny volana fahadimy 2018 ary hatreto, ny famoahana eReader vaovao dia tsy be loatra na malaza be. Ireo marika lehibe ao amin'ity sehatra ity dia mbola tsy naneho hevitra momba ny fitaovany ary hatreto dia fitaovana vaovao roa ihany no natolotra, izay tsy mbola azo vidiana. Tsy midika izany fa ny marika lehibe dia nandao ny eReader fa manomana fitaovana vaovao izay hatsangany mandritra ity taona ity amin'ny fomba tokana sy tokana.
Ireo fitaovana natolotra hatreto dia ny SonyDPT-CP1 ary ny eOnebook. Ireo fitaovana ireo dia eReaders efijery lehibe. Ary toa izany ny efijery lehibe no ho fampiasa hanamarihana ireo famoahana eReaders ho avy. Manaraka izany dia hanao fanadihadihana momba ny fandefasana eReaders izay halefa na antenaina hapetraka mandritra ity taona 2018 ity izahay.
Ilay voalohany dia nantsoina InkBook Infinity. Ity fitaovana ity dia an'ny orinasa InkBook, malaza mandritra ny taona maro noho ny fiasany amin'ireo fitaovana mihoatra ny efijery 6 "ary koa ny teknolojia vaovao. Amin'ity tranga ity dia miresaka momba ny InkBook Infinity, eReader misy efijery 10,3 "miaraka amin'ny teknolojia Carta.
Ny eReader dia hanana jiro eo aloha sy efijery mikasika. Voalaza fa ity fitaovana ity hanomboka amin'ny fahatsiarovana ram 1 Gb, bateria 3.000 mAh ary port USB-C hampifandray ity fitaovana ity amin'ny fitaovana hafa toa ny solosaina na solosaina finday. Ny processeur an'ity eReader ity dia ho i.MX6SL amin'ny 1 Ghz na dia zavatra mbola tsy voamarina aza izy io. Ny vidiny sy ny daty fandefasana dia lafiny roa izay tsy fantatsika koa, fa raha dinihintsika ny làlan'ny InkBook dia mety tsy mihoatra ny 300 € ny fitaovana.
1 Onyx Boox Nova
2 Tolino Pejy 2
3 Kobo Clara HD
4 Kindle fototra vaovao?
5 Ary ireo eReaders rehetra ireo, oviana izy ireo no azo vidiana?
Ny orinasa Onyx Boox dia iray amin'ireo orinasa mavitrika indrindra amin'ny resaka famoahana modely. Vao tsy ela akory izay dia nahita eReader misy efijery lehibe izahay ary antenaina fa hisy modely vaovao halefa mandritra ny taona 2018. Manokana, fantatsika modely efatra: Onyx Boox Nova, Onyx Boox Note S, Score e-Music Onyx Boox, ary Onyx Boox Poke. Ny farany dia misy efijery 6 "raha ny ambiny kosa misy efijery lehibe.
Ny tena mahavariana ahy dia ny Onyx Boox Nova, fitaovana hanana efijery 7,8-inch miaraka amina memoza 1 Gb sy Android 6 ho toy ny rafitra miasa. Ny eReader dia hanana efijery fanoratana elektronika miaraka amin'ny teknolojia Carta, Wi-Fi ary Bluetooth. Note S sy e-Music Score dia hahatratra 10 ", ny iray manokana amin'ny fandraisana an-tsoratra (Note S) ary ny iray amin'ny tontolon'ny mozika (Score e-Music). Ny maodely rehetra dia hanana Android 6, kinova farany tsy ela izay ahafahan'ny fampiharana finday avo lenta miasa amin'ireo fitaovana ireo, toa ny Evernote, Google Calendar na Google Docs, ankoatry ny hafa.
Ireo fitaovana ireo dia tsy maintsy arahana tsara toy ny ireo maodely eReader ireo dia eReaders fotsy, izany hoe, amidy izy ireo hamoronana fivarotana eReaders hafa na rojom-pivarotam-boky izay ovainy ny anarana saingy mijanona ho iray ihany izy ireo, izay mora azon'ny mpampiasa sasany noho ireo eReaders hafa toy ny InkBook na Tolino.
Tolino Pejy 2
Ny fiaraha-miasa Tolino na Tolino, isan-taona dia manolotra fitaovana iray na maromaro hanandramany hifaninana amin'i Amazon lehibe. Na dia marina aza fa mazàna no anaovany izany ho an'ny Frankfurt Fair, amin'ny volana Oktobra, rehefa manararaotra manao io fandefasana io izy. Tamin'ny taon-dasa dia miloka izy ireo Epos Tolino, eReader misy efijery 7,8-inch ary teknolojia Letter sy HZO.
Fahombiazana any Eoropa afovoany ity mpamaky ity ary toa tsy havaozina amin'ity taona ity fa raha mety ny eReader ambanyo, Tolino Page. Ity fitaovana ity Izany dia hampiakatra ny bateria, hampiakatra ny fizakan-tena ary hanatsara ny vahaolana amin'ny 800 x 600 teboka amin'ny 1024 x 728 teboka. Fanapahan-kevitra miely kokoa amin'ny tontolon'ny eReader.
Ity no fitaovana tsy fantatra loatra hatreto ary fantatsika ny fisiany amin'ny FCC. Ny anaran'ny fitaovana ity dia mifanaraka amin'ny marika Kobo na Rakuten Kobo eReader. ny Tatitra FCC Voafetra hatramin'ny volana septambra izany volana izany ka antenaina ho daty fanombohana.
Momba ny faritra aiza no misy azy ny Kobo Clara HD, tsy fantatra izany fa raha mijery ny antontan-taratasy dia hitantsika izany manana bateria 1.500 mAh, bateria kely afaka mifanaraka mankamin'ny eReader ambany afovoany, izany hoe ny fanoloana ny Kobo Aura Edition 2. Na ahoana na ahoana, mandra-pahatongan'ny volana septambra dia tsy hahalala na inona na inona momba ity fitaovana ity izahay.
Kindle fototra vaovao?
Amazon dia tsy namoaka fitaovana vaovao nandritra ny fotoana ela, farafaharatsiny maodelin'ireo fitaovana sahaniny: ny Kindle fototra sy ny Kindle Paperwhite. Ireto maodely roa Amazon eReader ireto dia hitan'ny manam-pahaizana maro izay mieritreritra fa hanavao tsy ho ela i Amazon. Ny Kindle level entry izay amidy amin'izao fotoana izao dia mbola manana ny fampirantiana ny teknolojia Voahangy, fampisehoana efa antitra izay mety hisotro ronono hanamboarana lalana ho an'ny fampisehoana Carta HD, nefa tsy hampiakarana ny vidin'ny fitaovana.
Ny Kindle Paperwhite dia tsy hanova ny efijery fa hahazo output audio, mba hifanaraka amin'ny serivisy audiobook an'i Audible an'i Amazon. Ary izany ve Ny orinasan'i Bezos dia miloka be amin'ny serivisy Audible sy Alexa, serivisy mifanaraka amin'ny ankamaroan'ny fitaovana rehetra afa-tsy ireo eReaders anao izay mbola tsy zaka. Ireo fitaovana avo lenta dia mety hahazo zava-baovao saingy tsy azo inoana izany satria nohavaozina vao tsy ela ny Kindle Oasis 2 ary ny fiovana rehetra dia midika fatiantoka amin'ity maodely ity.
Na izany na tsy izany, mino aho (toa ireo manam-pahaizana momba ny indostria maro) fa i Amazon Raha hanavao maodely marobe amin'ny eReaders ianao amin'ity taona 2018 ity raha te hifanaraka amin'ny serivisinao rehetra, taloha sy vaovao (tafiditra ao ny Alexa).
Ary ireo eReaders rehetra ireo, oviana izy ireo no azo vidiana?
Io no fanontaniana apetraky ny maro aminareo. Nandritra ity taona ity dia hitako ny nahatonga ny roa volana ho ivon'ny fandefasana eReader: ny volana aprily sy ny volana septambra. Satria tsy misy na iray aza amin'ireo fitaovana ireo natomboka nandritra ny volana aprily dia toa izany Amin'ny volana septambra izao no hahitantsika ireo fitaovana vaovao ireo. Na dia azo alefa amin'ny volana desambra aza ireo maodelin'i Amazon, aorian'ny zoma mainty. Na izany na tsy izany, Mino aho fa misy fitaovana tsara eny an-tsena amin'izao fotoana izao hahafahanao mahazo iray ary tsy hahafoana ny fiasa mifandraika amin'ireo maodely vaovao. Raha te hanavao na hividy eReader ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ireo mpamaky rehetra » Hardware » mpamaky » Inona ireo eReaders hiseho mandritra ity taona 2018 ity?
Patroclus58 dia hoy izy:
Tamin'ity taona ity dia niseho ny PocketBook InkPad 3 (vao nividy azy aho) ary avelao aho hiteny aminao fa na dia tsy mora na mora vidy loatra izy io, dia fitaovana iray izay nankafiziko vetivety.
Ity marika ity dia tsy raharahiana loatra amin'ny fanamarihana, ary tsy misy manorotoro ny anarany ao amin'ireo lahatsoratr'ireo toerana voatokana, fa ireo izay liana te hahafantatra, dia manao fikarohana kely; Manome toky aho fa mendrika izany.
Valiny tamin'i Patroclo58
Javi dia hoy izy:
Manontany tena aho raha hanapa-kevitra ny handefa maodely efijery lehibe (mihoatra ny 9 ″) i Amazon. Hatramin'ny Kindle DX dia tsy sahy izy ary liana aho. Nolazaiko foana fa ny mpamaky efijery lehibe dia tokony hisy loko eo amin'ny efitranony saingy matahotra aho fa tsy hitranga izany, farafaharatsiny amin'ity folo taona ity.
Hitako fa tena mahaliana ireo maodely boky Onyx.
Valiny tamin'i Javi
Caliber Portable: mifanaraka amin'ny Mac ve izy io? Ahoana ny fomba fiasa?
Sarona fandoroana tsara indrindra